Fandaharam-pampianarana ara-tsosialy momba ny sosialy amin'ny sekoly ambony
Ho an'ny mpampianatra Loharanom-pitaovana ho an'ny mpampianatra
Fandaharam-pianarana sosialy ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa
Ny fianarana ara-sosialy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa dia mifamatotra telo taona amin'ny fanomezan-dàlana takiana miaraka amin'ireo voafidy fanampiny. Ireto manaraka ireto dia ny fijerena ireo fianarana takiana ireo miaraka amin'ireo safidy mety ho hitan'ny sekoly ambaratonga faharoa.
Fandaharam-pianarana fianarana ny fianarana ambaratonga sosialy amin'ny fianarana sosialy
Taona I: tantara manerantany
Ny fandaharam-pianarana manerantany momba ny tantara dia mazava ho azy fa fandaharam-pianarana marina. Noho ny fe-potoana voafetra, ny mpianatra dia mahasalama fotsiny ny kolontsaina samihafa sy ny tantarany manerana izao tontolo izao.
Ny fandaharam-pampianarana matanjaka indrindra eran-tany dia ny fifandraisana eo amin'ny kolontsaina manerantany. Toy izao manaraka izao ny fivoaran'ny tantara:
Prehistory sy ny lehilahy voalohany
Ny sivilizasiôna voalohany (Mezopotamia, Ejipta, India, Shina)
Gresy sy Roma
Shina sy Japana any Moyen-Orient
Fahagola tany Eoropa
Renaissance sy Fanavaozana any Eorôpa
Ny tantaran'ny tontolon'ny siantifika manerana izao tontolo izao dia ny fiovan'ny toetr'andro. Ity fianarana ity dia heverina ho fampandrenesana fampidiran-dàlana fianarana sosialy fampidiram-bola.
Taona faharoa: Fomba fianarana
Ity drafitry ny fianarana ity dia mihevitra fa telo taona monja dia tsy maintsy atao amin'ny fianarana sosialy ho an'ny diplaoma. Noho izany, amin'ity taona ity dia ny mpianatra iray matetika no maka ny fianarana ara-tsosialy sosialy. Tsy voatery ho marimaritra iraisana io lisitra io, fa solontenan'ny sekoly ambony iray.
Psychology na AP Psychology
AP Government Comparative
Taona fahatelo: Tantara Amerikana
Ny fandaharam-pianarana Amerikana dia samy hafa amin'ny toerana.
Ny sasany dia manana tantara amerikana any amin'ny lisea dia mandrakitra ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny Ady An-trano Amerikanina raha ny hafa dia manomboka amin'ny voalohany. Amin'ity fandaharam-pampianarana ity dia manomboka amin'ny fijerena fohy momba ny fipoahana sy ny zava-baovao isika alohan'ny hitsambikina any amin'ny faritry ny fanjanahantany. Ny iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny fandaharam-pianarana Amerikana dia ny hanasongadinana ny fototry ny antony sy ny fifandraisana misy eo amin'ny hetsika maro izay niseho nandritra ny lasa tany Amerika.
Ny fifandraisana dia nasongadina niaraka tamin'ny dinamikan'ny fifandraisana misy eo amin'ny vondrona, ny fananganana ny maha-olom-pirenena, ny fiakaran'ny hetsika sosialy, ary ny fitomboan'ny andrim-panjakana federaly.
Ny AP American History dia fanoloana mari-pahaizana ho an'ny Tantara Amerikana. Ity laha-dingana ity dia mirakitra lohahevitra izay ahitana ny fitadiavana sy ny fitrandrahana amin'ny alàlan'ny fitantanana ny filoha farany vao haingana.
Taona efatra: Fitondrana Amerikana sy Toekarena
Ny tsirairay amin'izy ireny dia maharitra mandritra ny antsasaky ny taona. Noho izany dia tendrena izy ireo matetika, na dia tsy misy antony aza ny tokony hanarahany ny tsirairay na ho tanteraka amin'ny filaminana manokana.
Fitondram-panjakana Amerikana: Ny governemanta Amerikana dia manome ny mpianatra ny fahatakarana fototra ny rafitra sy ny asan'ny governemanta any Amerika. Ny mpianatra dia mianatra momba ny fototry ny governemanta Amerikanina ary avy eo mifantoka amin'ny sehatry ny orinasa. Ankoatra izany, mianatra momba ny fomba ahafahan'izy ireo mandray anjara sy mandray anjara amin'ny governemanta izy ireo. Jereo ity drafitra amerikana ity.
Ny governemanta amerikanina AP dia manolo ny governemanta Amerikana. Mazava ho azy fa ity fotoam-pianarana ity dia mamelabelatra ny lohahevitra mitovy amin'ny governemanta Amerikanina saingy amin'ny lalindalina kokoa Ny lohahevitra dia napetraka amin'ny fandikana, ny fampiasana ary ny fanadihadiana ny politika sy ny rafitra governemanta.
Toe-karena: Mandinika ny foto-kevitra ara-toekarena manan-danja ny mpianatra eo amin'ny sehatry ny toe-karena, toy ny tsy fahasalamana, ny fanomezana ary ny fangatahana, Ny mpianatra dia mifantoka amin'ny fomba fiarahan'ny governemanta Amerikana amin'ny toekarena amerikana. Ny ampahany farany amin'ny fianarana dia mandany amin'ny fampiharana ara-toekarena marina eran-tany. Ny mpianatra dia tsy miankina fotsiny amin'ny toekarena mpanjifa, fa koa amin'ny antsipiriany momba ny tahiry sy ny fampiasam-bola.
AP Macroeconomics sy / na AP Microeconomics dia manolo ny Economics. Ity fizarana fampiofanana ity dia mifantoka kokoa amin'ny toekarena ara-tsosialy sy bebe kokoa amin'ny sehatra ara-toekarena momba ny toe-karena.
Fampahalalana fanampiny momba ny fandaharam-pampianarana: Zava-dehibe ny fampidirana ny fandaharam-pampianarana .
101 Mifanakalo hevitra sy mifanohitra amin'ny loha hevitra
Teny nalaina avy amin'i Neny Teresa
Fantaro hoe firy ny fifidianana tanteraka ny fifidianana
Ny sintom-bolan'ny Bloom - sokajy fanamarinana
10 horonantsary fanentanana ho an'ny mpampianatra
Fomba 7 ny mpampianatra manontany ratsy
Inona no mitranga raha misy fifamatorana eo amin'ny kolejy ny fifidianana?
Mampiasa ny gazetiboky ao amin'ny efitrano fianarana faharoa
Firy ny mpifidy ny fanjakana tsirairay?
Ny 8 Best Learning Management Systems hividy amin'ny 2018
Cosmos Fahagagana 12 Jereo ny asa atao
Bera College GPA, SAT sy ACT Data
Ny 'Crown' ny Club Golf iray: Ny Hevitra sy ny Fandrindrana
Tombana iombonana cation
Lisitry ny Krismasy momba ny Krismasy miaraka amin'ny sisin-tanim-panjakana
Ny mpampiasa anao ve ny tranonkala?
Fampidirana ho an'ny mpianatra ESL - Advanced Leveles
Ny fomba sy ny fotoana ampiasana ny teny frantsay
Mpomba ny Confederate amin'ny ady tao Gettysburg
10 Antony tokony hampiasana dobo filaminana tsy misy farany
Ny famaritana ny kapoty (ny klioba)
Ahoana ny fomba fampiasanao Italiana?
Ny sarimihetsika tsara indrindra dia avy amin'ny 'The Hangover'
Ny didy faha-11 an'ny politika repoblikana
Inona no toetry ny Xia Dynasty tany Sina fahiny?
Omega Dubai tany an-dalamby mozika golf
Tavoahangin'ny Tiger Extinctions
Faly miarahaba ireo mpitarika mpifaninana
Ady Meksikana-Amerikana: Ny fototry ny fifandonana
Fitsipika iray ao amin'ny baolina: Manao fandringanana baolina ny lakolosy mandritra ny fihodinana ve ny fitsipiky ny golf?
Ny fomba hitady servisy tsara rehefa milalao squash